LG G4 ၏စျေးနှုန်းမှာ ၆၄၉ ယူရိုဖြစ်သည် Androidsis
LG G4 ၏စျေးနှုန်းသည်အမြင့်ဆုံး Android အကွာအဝေးတွင်အသက်သာဆုံးဖြစ်သည်
တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူ LG G4 သည်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားအဆင့်မြင့် Android ထုတ်ကုန်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှအလွန်အားကောင်းသည်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီ၏ပြိုင်ဘက်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်ပြိုင်ဆိုင်မှုမည်မျှရှိသည်ကို Android ၏အဆင့်မြင့် Android တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကွန်ယက်မှဖြတ်သန်းသွားသောပေါက်ကြားမှုများစွာပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်အံ့အားသင့်စရာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသည့်နေရာကို terminal ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ LG G4 သည် G3 ၏ရှေ့ပြေးပုံစံအတိုင်းလိုက်ကာ LG G FLex range ၏အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုပြသသည်။ တင်ဆက်မှုမှာရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့သိပြီးဖြစ်ပေမယ့်စျေးနှုန်းကိုတော့မဖော်ပြထားဘူး။
Terminal သည်စျေးကွက်၌အထူးသဖြင့်၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်ဓာတ်ပုံအပိုင်းတို့တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ သင့်မျက်နှာပြင်က ၅ လက်မ Resolution 2560 x 1440 Pixels နှင့်သိပ်သည်းမှု 535 ppi နှင့်အတူ LG G Flex2၏မျက်နှာပြင်ကိုလည်းကွေးညွှတ်ထားသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင် curvature ၏အချင်း ၀ က်နိမ့်သည်။ LG ကပရိုဆက်ဆာကိုလောင်းသည် Qualcomm Snapdragon 808 ၎င်း၏ကြောင့်လက်ရှိ 810 ဘေးဖယ်ထွက်ခွာ အပူပြproblemsနာများ။ ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ ၂၀ Megapixel ကင်မရာ aperturef/ 1.8 နှင့်၎င်းကိုမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်အမြင့်ဆုံးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အတူ။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း terminal တွင်၎င်း၏အပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သော Samsung ၏ Galaxy S6 နှင့် HTC One M9 တို့နှင့်ကိုက်ညီရန်သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ high-end အကွာအဝေးနီးကပ်ပြီးအသုံးပြုသူသည်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းပေါ် မူတည်၍ terminal တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ 32GB သိုလှောင်မှုဗားရှင်း LG G4 ကို ၆၄၉ ဖြင့်ရောင်းချမည် € (သားရေအဖုံးဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောဗားရှင်းအတွက်ယူရို ၆၉၉)၊ Galaxy S699၊ S6 Edge နှင့် HTC One M6 တို့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အထူးသ LG G4 ၏ဈေးနှုန်းသည်အခြား high-end terminal များထက်ယူရို ၅၀ နှင့်ယူရို ၂၀၀ ကြားစျေးသက်သာသည်terminal အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်တဲ့အခါသုံးစွဲသူများစွာဒီစမတ်ဖုန်းကိုလောင်းနိုင်တဲ့အချက်ပါ။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ G4 သည်စျေးကွက်အတွင်းရှိဆိပ်ကမ်းများကဲ့သို့စျေးနှုန်းကျသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် high-end အကွာအဝေးတစ်ခုလုံး၏စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်သည့်အပြင်ထုတ်ကုန်၏တတိယမျိုးဆက်နှင့်လည်းအလားတူအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ။ တဖန်သင်တို့က, LG ရဲ့စျေးနှုန်းကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ G4 ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G4 ၏စျေးနှုန်းသည်အမြင့်ဆုံး Android အကွာအဝေးတွင်အသက်သာဆုံးဖြစ်သည်
Amazon တွင် # Nexus6 စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ယူရို ၅၁၂ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
David Montilla ကိုပြန်ပြောပါ
Mateo Gomez ဟုသူကပြောသည်
Alejandro Silva ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်လောက်လှတယ် :: 'D
Alejandro Silva သို့ပြန်သွားပါ
ကိုလံဘီယာသို့ရောက်ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းယခု !!!! 😀
မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်တာနဲ့သူတို့မွမ်းမံတာကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာကငွေဖြုန်းတီးခြင်းပဲ။
၎င်းသည် Android ၏ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ သူ့နောက်မှနောက် ၆ နှစ်ကျော်ပြီးသွားသောအခါ။
movistar မှအပအခြားလိုင်းတစ်ခုဖြင့်၎င်းသည် s6 ထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။
Ram သည်ဖုန်မှုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့် Earn to Die2တို့ကိုအတူတကွရပ်တန့်နိုင်သည်
ZTE Q302C LTE ပါ ၀ င်ပြီးယူရို ၁၀၀ အောက်သာရှိမည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်